Iibso 3Pcs/Lot aan Xad lahayn Xadhkaha suufka ah ee Dumarka Dumarka - Shixnad Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
3Pcs/Lot Seamless Cotton Lace Xarkaha Dumarka
F1/XXL A2 / M A2 / L A2 / XL A2 / XXL B2 / M B2 / L B2/XL F1 / M F1 / L F1/XL D2/XXL E2/M E2/L E2/XL E2/XXL B2/XXL C2 / M C2 / L C2/XL C2/XXL D2 / M D2 / L D2/XL C1 / M C1 / L C1/XL C1/XXL B1 / M B1 / L B1/XL B1/XXL E1/M E1/L E1/XL E1/XXL D1 / M D1 / L D1/XL D1/XXL A1 / M A1 / L A1 / XL A1 / XXL G2/M G2/L G2/XL G2/XXL F2 / M F2 / L F2/XL F2/XXL
3Pcs / Lot Seamless Cotton Lace Shaamanka Dumarka - F1 / XXL gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha: Cotton, Xariir
Nambarka Tusaalaha: 56086
Surwaal aad u wanaagsan !!! Dhab ahaantii wax badan ayaan dalban doonaa.
Sida had iyo jeer, wax walba waa hagaagsan yihiin! Waad mahadsan tahay! )))
Surwaal aad u fiican. Mar labaad ayaan dalbadaa. Soo gal ilaa bil. Alaabtu waa qanacday. Dhab ahaantii ku talin. Waxay qaadatay 2XL. Halka ugu hooseysa ee 48 rossisi.
Waxaan mar labaad ka dalbanayaa nigisyada woopshop. Aad ugu qanacsan tayada iyo sahlanaanta. Waxa kaliya ee markan qaar ka mid ah surwaalada aan si buuxda loo tolayn. Sababtaas awgeed, waxay umuuqataa in surwaalku mar hore yara xirtay. Ma aqaan haddii xariggu uu sii socon doono, laakiin tani weli waa hadalka kaliya.